Lamjung Khabar | नेपाली कांग्रेसमा इन्टर्नल डेमोक्रेसी हुने कि नहुने महाधिवेशनमा निर्क्योल हुन्छ
By Lamjung Khabar २०७७ साउन २७ गते मङ्गलबार ००:३० AM
नेपाली कांग्रेस आगामी फागुनमा हुने भनिएको चौधौँ महाविधेनको तयारीमा केन्द्रित छ । नेताहरू आआफ्नो समूहमा र व्यक्तिगतरूपमा महाधिवेशनकै रणनीतिअनुसार चल्न थालेका छन् । महाधिवेशनका विषयमा पार्टीभित्र मतभेदहरू पनि देखिन थालेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसको विपक्षी भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तै प्रसङ्गहरूको सेरोफेरोमा खबरहबका एकराज बास्तोला र गोविन्द लुइँटेलले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासँग कुरा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा छ, महाधिवेशन हुन करिब साढे ६ महिना बाँकी छ, कस्तो चल्दै तयारी ?
केन्द्रीय समितिले वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको मिति तोकेको छ । के के काम गर्ने भनेर पनि निर्णय गरेको छ । समायोजनको काम गर्नुपर्ने छ । समायोजन एउटा पार्टीसँग मात्रै छैन, धेरैवटा छन् । हाम्रै पार्टीको पनि २४० क्षेत्रबाट १६५ मा समायोजन गर्नु छ । नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणमा छ । जिल्ला जिल्लामा समस्या छ ।
उदाहरणका लागि, प्युठानमा साढे दुई वर्षमा ६ हजार जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । एक–डेढ हजार त मैले नै प्रवेश गराएको छु । अब त्यहाँ कति जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन सकिन्छ, हामीले अहिले भइरहेको सदस्यता ५० प्रतिशतले बढाउने भनेका छौँ । यसको निर्क्योल गर्नुपर्‍यो । यस्तै कुराले समय लिइराखेको छ ।
प्रक्रिया त सुरु भएको छ तर कोभिड–१९ ले केही समस्या पारेको छ । यसबाहेक अरू समस्याहरू पनि देखिराखेको छु ।
अरू कस्ता समस्या ?
महाधिवेशको मिति तोकिएको छ । वडादेखि सबै तहका अधिवेशनहरू तोकिएका छन् । यता केन्द्रमा विधानअनुसार ६ महिनाभित्रमा सकिनुपर्ने काम सभापतिजीले अहिले गरिरहनुभएको छ । विभागहरूलाई पूर्णता दिन थाल्नुभएको छ । भ्रातृ संस्थाहरू लथालिङ्ग छन् । समायोजनमा निर्वाचन समितिले जिल्लाबाट आएका रिपोर्टहरू खोलेर हेरेको छैन । विवादहरू सोझै केन्द्रीय समितिमा पठाइदिएको छ । रिपोर्ट त हेर्नुपर्‍यो नि ! निर्वाचन समिति किन बनाएको ! विवाद भएको ठाउँमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न भनेर बनाएको हो नि निर्वाचन समिति । त्यहाँ कामै भएको छैन । यस्ता कुराहरूले अप्ठ्यारो पारेको छ ।
यसको अर्थ, निर्वाचन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन भन्ने हो ?
धेरै ठाउँमा उहाँहरूले (निर्वाचन समितिले) काम गर्नुभएको छ तर जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो छ, सबै केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाउने होइन नि ! उहाँहरूले जसलाई जिल्लामा कामका लागि पठाउनुभएको छ, रिपोर्ट आएको छ तर रिपोर्ट पनि राम्ररी नहेर्ने ! विवाद मिलाउन कुनै प्रयास नगर्ने र केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाउने !
अर्थात, निर्वाचन समितिले आफ्नै अधिकार पनि प्रयोग गरेन भन्ने कुरा हो ?
हो, कुरा यही हो । यस्तो अवस्थाले त समस्या झन् झन् बढ्दै जान्छ ।
समायोजन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण तथा सबै तल्ला तहका अधिवेशनहरू सकेर निर्धारित मिति फागुन ७ मा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
समायोजन एघार जिल्लामा बाँकी छ, दुई नम्बर प्रदेशका त करिब सबै जिल्लामा बाँकी छ । समायोजन पूरा नभई अधिवेशन हुँदैन । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा सभापतिले अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई मनपर्दी ढङ्गले दिनेगरी निर्णय गर्नुभएको छ । यो विषय सभापतिजीले केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुभएको छैन ।
हामीले विजय गच्छदारजीको पार्टी समायोजनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएका थियौँ । समितिले आफ्नो काम गर्दै होला तर गच्छदारजीको पार्टीपछि अरू धेरै पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसमा आएका छन् । सभापतिजीले सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिन खोज्नुभएको छ तर यसबारेमा उहाँले केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउनुभएको छैन । हामीलाई थाहै छैन । यस्ता विषयले केन्द्रीय समितिमा प्रवेश नै पाएको छैन ।
विजय गच्छदारजीको पार्टी आउँदा विजयजीलाई कुन पद दिने, कति जना केन्द्रीय सदस्य दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि त सभापतिजीले के के गर्नुभएको छ, केही थाहा छैन । उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निर्णयहरू गरिरहनुभएको छ । नभएको अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
वडादेखि सबै तहको अधिवेशन समयमा हुन सकेन भने त फागुनमा महाधिवशेन हुन कठिन हुन्छ । उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) ले केही अनियमितता गर्दा गर्दै पनि फागुनमै महाधिवेशन होस् भन्ने म चाहन्छु ।
भ्रातृ संस्था, जनसम्पर्क समितिहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट पनि महाविधेशन प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था छ । यस्ता संस्थाहरूको अधिवेशन भएको छैन भने महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि पठाउन पाउँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ विधानमा ।
यसमा पनि उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) अड्चन लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । समयमा महाधिवेशन गराउनुहुन्न तर महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन खोज्नुहुन्छ ।
सभापतिजी यति अनडेमोक्रटिक (अप्रजातान्त्रिक) तरिकाले चल्नुभएको छ । सात वर्ष भयो दलित संघको अधिवेशन नभएको । तरुण दल र नेवि संघ तदर्थ समितिमा चल्दैछन् । धेरै जनसम्पर्क समितिहरू तदर्थ समितिमा चल्दैछन् । प्रेस युनियन र प्राध्यापक संघको हालत उस्तै छ । अधिवेशन भएको छैन ।
जुन जुनको अधिवेशन भएको छैन त्यहाँबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन पाउनुहुन्न । म कति भोट पाउँछु वा अर्कोले कति पाउँछ भन्ने होइन । अनडेमोक्रेटिक ढङ्गले चल्न पाइँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।
हामी कम्युनिष्टहरू अलोकतान्त्रिक तरिकाले चल्छन् भन्छौँ अनि हाम्रो पार्टीभित्र सभापतिले अलोकतान्त्रिक तरिकाले काम गर्ने ! कांग्रेसमा यस्तो अलोकतान्त्रिक तरिका हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
यसो हो भने त धेरै भ्रातृ संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँदैनन्, होइन ?
जुन संस्थाको अधिवेशन भएको छैन, तीबाट प्रतिनिधि ल्याउन पाउनुहुन्न । हामी त्यसरी ल्याउन दिँदैनौँ । उहाँहरू अधिवेशन नगराई महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन चाहिरहनुभएको छ, किनभने ती संगठनमा उहाँ (सभापति) कै मान्छेहरू अध्यक्ष छन् । त्यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनु गलत हो । हामी पनि हेर्छौं नि कसरी ल्याउनुहुन्छ !
पार्टीको आन्तरिक कुराबाहेक, फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने गरी कोभिड–१९ वा काबुबाहिरको यस्तै कुनै चुनौती देख्नुभएको छ ?
कोभिड–१९ एउटा चुनौती हुनसक्छ । यसबाहेक त पार्टीभित्रै समस्या छ । मुख्य समस्या क्रियाशील सदस्यताकै हो । रसुवामा एउटा पार्टीको एउटा पक्ष नै आएको छ । अब उहाँहरू (सभापति पक्ष) ले त्यहाँको जिल्ला समितिभन्दा केही कमलाई जिल्ला समितिमा राख्ने भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन्छ ! कांग्रेसका पुराना मान्छे पन्छिँदै जाने, अनि नयाँ मान्छेले नेपाली कांग्रेसलाई बनाउन सक्छ ?
उहाँहरू (नवप्रवेशी) लाई सम्मान गर्नुपर्छ तर पुरानालाई पन्छाउन पाइँदैन । र्‍यान्डम क्रियाशील सदस्यता दिने भन्नुभएको छ, कतै एक हजारलाई, कतै दुई हजारलाई । यस्तो गलत निर्णय गर्नुभएको छ । हामी यसको विरोध गर्छौं । यस्तै केही कारणले महाधिवेशन ढिलो हुन सक्छ कि भन्ने पनि छ । तर, यसले ढिलो हुनु हुँदैन ।
कोभिड–१९ एउटा कारण हुन सक्छ तर यसमा पनि उपाय हुनसक्छ । काठमाडौंमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन । कांग्रेसको इतिहास छ, २०१४ सालसम्म जिल्ला जिल्लामा हुन्थ्यो, केन्द्रमा रिजल्ट सुनाइन्थ्यो । आजकाल त अनलाइन भोटिङको पनि सुविधा छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्न सक्ने धेरै उपायहरू हुन सक्छन् । देशभरिबाट काठमाडौंमै भेला हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
प्रेस युनियनमै यस्तै नयाँ तरिका गरे त हुन्थ्यो नि ! अरू सङ्गठनको पनि गरे हुन्छ तर उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) को रुचि नै छैन । अधिवेशन गराउन चाहनुहुन्न । अधिवेशनबाट कस्तो मान्छे आउने हो, आफ्नो पक्षको नआउने हो कि भन्ने छ । सभापतिजी र उहाँको कोटरीलाई चुनावसँग डर छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा विभागहरू धमाधम गठन गर्दै हुनुहुन्छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितले विरोधपत्र नै बुझाउनुभएको छ, विभाग गठनमा किन विरोध ?
पहिलेको विधानमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको छ तर उहाँ (सभापति) त साढे चार वर्ष सुतेर बस्नुभयो । यति वेला विभाग बनाउनु भनेको त दिवालियापन हो भन्छु म त । अब ६ महिनाका लागि किन बनाउने ! जति बनाइसक्नु भयो भइगयो, अब नबनाउनुहोस् । हामीले पत्रकार सम्मलेन पनि गर्‍यौँ । रामचन्द्रजीले जो जो साथीहरू विभागमा पर्नुभएको छ, छोडिदिनुस् भन्नुभयो । उहाँहरूले काम गर्न त पाउनुहुन्न । नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । म साथीहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न भन्छु ।
सुशील कोइरालाको पालामा विभागमा यस्तै अप्ठ्यारो भएको थियो । चार वर्षको कार्यकालमा उहाँले दुई वर्षमा विभागहरू बनाउन थाल्नुभयो । शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुभयो, केन्द्रीय समितिमा सहभागी हुनुभएन, शेरबहादुरजी र उहाँको ग्रुप । सुशीलजीलाई लाग्यो होला, समयमा गर्न सकिएन, कांग्रेसलाई एक ढिक्का राख्नैपर्छ, अनि उहाँले विभागहरू बन्द गर्नुभयो, गठन गर्नुभएन ।
आज शेरबहादुरजी त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ र गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजीले यस्तो अलोकतान्त्रिक काम गर्न मिल्छ ! उहाँ (शेरबहादुर देउवा) र उहाँको कोटरी जति अनडेमोक्रेटिक कोही हुँदैन ।
अनि कम्युनिष्टलाई तिमी अलोकतान्त्रिक छौ भनेर, अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने ! पहिला आफ्नो संस्कार लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो नि ! यो त राजनीतिक संस्कारै नभएको भयो नि त ! कांग्रेसको नेतृत्व नै लोकतान्त्रिक भएन भने कांग्रेसले अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउन सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेसमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाको समूह र अर्को तपाईंहरूको, रामचन्द्र पौडेल र कोइरालाहरूसहित, दुई वटा समूह र कृष्णप्रसाद सिटौलाको अर्को समूह सक्रिय छन्, अन्य ससाना गुटहरू पनि होलान् । चौधौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि कति समूहको प्रतिस्पर्धा होला ?
यो अहिले भन्न गाह्रो छ । तीन वटा समूह त तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो । इच्छा, आकांक्षा राख्नेमान्छे धेरै हुन्छन् । यो सामान्य कुरा हो । विधानमा प्रष्टै छ, सभापति निर्वाचित हुन कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । रामचन्द्रजीको समूह अर्थात हामी सभापतिजीको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै क्लोज कन्ट्याक्ट (निकट सम्पर्क) मा छौँ । एक आपसमा कुरा गरिरहेका छौँ । हामी मिलाएरै अगाडि जान्छौँ ।